သူ.နံမည်က ဘနားနားချောကို တဲ.။ ဒီမှာ ပွဲဈေးတစ်ခုရှိပြီဆိုလို.ကတော့ သူ.ကိုတွေ.ရမှာပါပဲ။
သူ.ကို ဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲဆိုတော့၊ ငှက်ပျောသီး ကို တူနဲ.ထိုးချောကလက်ရည်ဆွတ်ပြီး (ကိတ်မုန်.နဲ. ရေခဲမုန်.တွေမှာသုံးတဲ.) အချိုမှုန် လှလှကလေးတွေကပ်ထားထာပါ။ အေးတယ်။ ချိုတယ်။ ချွဲတယ်။ စိမ့်တယ်။ မာသလိုနဲ. ပျော့တယ်။
စားလို.ကောင်းပါတယ်။ မစားဘူးရင်စားကြည့်ပါအုန်း။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ဒီလိုလုပ်မှမစားတော့ ခပ်ဆန်းဆန်းပဲ။
ဂျပန်လူမျိုးတွေက အတိုကောက်ခေါ်တတ်တဲ. ဓလေ့ရှိတဲ. အတွက် ချောကလက်သုတ်ထားသော ငှက်ပျောသီးကို “ဘနားနားချောကို” ဒါမှမဟုတ်
“ ချောကို ဘနားနား”လို.ခေါ်ကြတယ်လေ။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Wednesday, October 07, 2009
ဘနားနားချောကို ကို မစားဘူးဘူး။ ဒီမှာ ရှိလား မသိဘူး။ ဒီတစ်ခါ ဂရုတစိုက် ရှာကြည့်အုံးမယ်.. စားချင်စရာလေး.. အရမ်းကြီး ချို နေလား မသိဘူး နော်....
"ဘနားနားချောကို" ကို စားသွားပါတယ်
( အမြင်နဲ့ပေါ့ ) မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်မှ ငှက်ပျောသီးကို ဒုတ်ထိုး ထန်းညက် ရည်ထဲနှစ်၊ ပြီးတော့ နှမ်း လေးတွေဖြူးပြီး "ဘနားနားထန်းကို"
ညီမက အချိုအရမ်းကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ ကြည့်ရင်း တံတွေးလေးတောင် မျိုချလိုက်မိတယ်း)) တနေ့နေ့တော့ “ချိုကိုဘနားနား” ကို စားဖူးချင်ပါသေးတယ် အစ်မရယ်...